Hatsaraina ny fomba fitantanana eo amin’ny sehatra ara-toekarena
Vita ny fifanaovantsonia ny zoma faha 8 aogositra
Fanatsarana ny fifehezana sy fitantanana ara-toekarena aty amin’ny faritra Atsinanana, natao ny zoma 8 aogositra, tao amin’ny efitrano filankevitry ny faritra Atsinanana ny sonia fiaraha-miasa izay nifanaovan’ny lehiben’ny faritra Atsinanana sy ny talen’ny varotra sy ny fanjifana eto Toamasina. Tonga nanatrika izany fifanaovantsoniam-piaraha-miasa izany, ny minisitry ny varotra, ny minisitry ny atitany ary ny minisitry ny asam-panjakana. Nanambaran’ Atoa Narson RAFIDIMANANA, minisitry ny varotra fa zava-dehibe ny fifanaovan-tsoniam-piaramiasa satria manome hery ny faritra Atsinanana.
Nanamafy ihany koa ny lehiben’ny faritra Atsinanana Atoa TALATA Michel fa isany fitaovana hoentina mampandroso ny faritra izao hetsika firaha-miasa izao. Isan’ny anjara asan’ny faritra Atsinanana amin’ity fiaraha-miasa ity ny mamatsy ara-pitaovana, eo ihany koa ny famoriana ireo DELEGUE sy ireo ben’ny tana ato anatin’ny faritra amin’ny fampafantarana ny hetsika.
Anjaran’ny talen’ny varotra kosa no manao ny fanadiadihana ifotony sy manangona ny antontan’isa momba ny vokatra vokarin’ireo tantsa.
Antenaina izany fa hitondra fivoarana eto amin’ny faritra Atsinanana izao hetsika izao.
(68) Prud′Homme RAKOTOSON : 09-08-2014 - 10:30